Tilmaamaha Nostalgic Tram Imaatinka Mersin | RayHaber | Wadada Tareenka | Wadada weyn | cable baabuur
HomeTURKEYCoast Mediterranean33 MersinImaatinka Nostalgicramram ee Mersin
09 / 11 / 2019 Levent Elmastaş 33 Mersin, Coast Mediterranean, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, TURKEY, taraamka 0
tram nostalgic soo socda myrtle
Dawlada Hoose ee Magaalada Mersin waxay bilowday inay ka shaqeyso Mersin Landscape Master Plan oo ah tii ugu horeysay taariikhda magaalada. Duqa Magaalada Magaalada Mersin Vahap Seçer'in shaqadiisa wuxuu ka bilaabmay hogaan, isaga oo tixgalinaya aragtida dhaqdhaqaaqa magaalooyinka.
Duqa Magaalada Caasimadda, Seçer, wuxuu la kulmay naqshadeeyayaasha muuqaalka muuqaalka ah, injineero beeraha, naqshadeeyayaal, qorsheyaal magaalada iyo mas'uuliyiin ka tirsan Jaamacadda Mersin, kuwaas oo fikrad ka dhiibanaya muuqaalka muuqaalka illaa iyo maalintii uu xafiiska qabtay. Wuxuu rabay in shaqadu bilaabato. Jihadaan, shaqadii waa la soo gabagabeeyey. Iyada oo la raacayo Qorshaha Mersin Landscape Plan, magaalo qorshaysan oo casri ah, la dego iyo cagaar ayaa loogu talagalay.
Mersin 'mustaqbalka sanadlaha ah ee' 20 Muuqaal 'waa la qorsheeyay
Isagoo sheegay inay muhiimad weyn siinayaan muuqaalka muuqaalka iyada oo la raacayo qorshaha kaas oo mustaqbalka Mersin 20 mustaqbalkiisa sanadlaha ah la saadaalinayo marka laga hadlayo meelaha cagaaran, Duqa Seçer wuxuu yiri, tanesi Mid ka mid ah mowduucyada aan dusha saaray waa muuqaalka magaalada. Nadiifinta magaalada waa dhacdo si toos ah u taabaneysa muwaadinku. Qof kasta oo ilbaxnimo leh wuxuu doonayaa inuu ku noolaado magaalo caadi ah, magaalo uu cagaarku ku badan yahay, muuqaalku wuu ka qurux badan yahay qurxintuna waa ka qurux badan tahay. Mersin waa magaalo casri ah iyo magaalo casri ah. Ugu yaraan waxaan leenahay sheegashada noocan oo kale ah. Maaha meesha aan ka rabno, laakiin waxaan abuuri doonnaa magaalo ka wanaagsan kan. Waxaan dooneynaa inaan abuurno magaalo aad u weyn oo muuqaalkeeda, kala dambaynteeda iyo casri ahaanba ah. Sidaa darteed, waxaan danaynaynaa muuqaalka dhulka ”.
Dooxada Mufti noloshuna way noolaan doontaa
Ugu horreyn, soosaarka dhirta ee Mersin waa la diyaarin doonaa waxaana la abuuri doonaa khariidado aag cagaaran oo isbeddelada cimilada lagu tixgalin doono howlaha qodista dhirta oo lagu fulin doono inta uu gaarsiisan yahay qorshaha. Qaab dhismeedka dhexdiisa, waxaa loo qorsheeyay in la isticmaalo noocyada dhirta ee u adkaysata kordhinta heerkulka iyo abaarta, iyo noocyada geedka waaweyn ee hooska.
Hawlaha lagu fulin doono baaxadda mashruuca naqshadeynta Mufti Valley Magaalooyinka, oo loo qorsheeyay si ka duwan baaxadda qorshaha, waxaa looga golleeyahay in la sameeyo qorshe lagu taageerayo cilmiga deegaanka iyo qorshaha cimilada iyadoo la abuurayo dariiqyo cagaaran ee jihada waqooyi-koonfur iyada oo loo marayo helitaanka iyo diyaarinta aagagga cagaaran ee ku teedsan dooxada. Baaxadda mashruuca dooxada, oo ay kujirto wadooyinka baaskiillada ee kiloomitir 26, taraamka nostalgic ee ku xira aagga laga bilaabo Mersin Railway Station wuxuu shaaca ka qaadi doonaa aqoonsiga taariikhiga ah ee magaalada.
Qaab-dhismeedka magaalada Mersin, adoo raacaya aqoonsiga aagga cagaaran ee magaalada ayaa lagu abuuri doonaa iyada oo la fiirinayo mashruuca oo la filayo in sida ugu dhakhsaha badan loo dhammeeyo.
Tareenka Nostalgic ayaa imaanaya Izmit ..!
Khadadka Cusub ee Nostalgic Tram wuxuu imanayaa Istanbul
Shaqaalaha ka shaqeeya mashruuca TCDD kana tagaya shaqada Mersin iş